Ny antsipiriany any an-tsehatra amin'ny lalao Shawn Michaels sy Hulk Hogan mampiady hevitra amin'ny WWE SummerSlam 2005 dia nambara - Wwe
Ny antsipiriany any an-tsehatra amin'ny lalao Shawn Michaels sy Hulk Hogan mampiady hevitra amin'ny WWE SummerSlam 2005 dia nambara
Bruce Prichard dia manam-pahaizana momba ny ady amin'ny zava-drehetra ary efa nandray anjara tamin'ny sehatra tolona tamin'ny endrika iray na ny iray hafa nandritra ny am-polony taona vitsivitsy lasa izay. Ao amin'ny podcast Something to Wrestle miaraka amin'i Conrad Thompson (h / t 411 Mania ), Bruce Prichard dia fantatra amin'ny famolavolana ny mpihaino azy amin'ny tantara avy amin'ny zavatra niainany tamin'ny tolona. Tamin'ny fizarana vao haingana tao amin'ny podcast nataony, Bruce Prichard dia nizara tantara iray tamin'ny fotoana nifanatrehan'i Shawn Michaels tamin'i Hulk Hogan tao amin'ny WWE SummerSlam 2005.
ataovy mandeha haingana kokoa any am-piasana ny fotoana
Ny lalao dia iray amin'ireo lalao niteraka resabe momba ny zava-nitranga. Shawn Michaels sy Hulk Hogan dia tokony hanana andiana lalao izay nifanakalozan'izy ireo fandresena, ka i Hogan no nandresy tamin'ny voalohany tamin'ny WWE SummerSlam. Na izany aza, talohan'ny SummerSlam dia nanonona olana momba ny ratra i Hogan ary nilaza fa ny lalao hataony amin'ny SummerSlam dia ho iray ihany - sendra ny lalao tokony ho nandreseny. Shawn Michaels dia tsy nandray tamin-katsaram-panahy izany ary naneho hevitra tamin'ny fandoavana ny zavatra rehetra nataon'i Hogan tamin'io lalao io, ka nahatonga zavatra mahatsikaiky.
#OnThisDayInWWE 15 taona lasa izay #WWERaw , @ShawnMichaels voafitaka @HulkHogan mialoha ny lalao ataon'izy ireo ao amin'ny SummerSlam pic.twitter.com/m4YVKf0iUc
- Amin'ity Andro ity any WWE (@WWEotd) 1 Aogositra 2020
Bruce Prichard dia nanambara ny antsipirian'ny lalao WWE SummerSlam 2005 teo amin'i Shawn Michaels sy Hulk Hogan
Bruce Prichard dia nanambara tao amin'ny podcast azy, fa na dia teo am-pananganana ny lalao tany WWE SummerSlam aza i Shawn Michaels dia nivadika voditongotra, na misy ilàna ny mihodina na tsia dia resaka adihevitra any ambadika WWE.
'Fa heveriko fa tsy maintsy nitodika olona ianao. Shawn dia afaka nanao zavatra voditongotra, ary i Hogan dia nanao zavatra voditongotra. Namela ny helok'izy ireo ny mpankafy azy ireo, ary ny mpankafy ny hafa dia nanamavo azy ireo noho izany. Ity dia karazana filalaovana ny toetran'ny lehilahy sy ny tsy fanaovana feno ‘Andriamanitra ô, mila ombelahin-tongony ity lehilahy ity.’ Eny, tonga tany ihany izahay nony farany. Fa na dia tonga tany aza izahay dia heveriko fa mbola voazarazara ihany.
Averina indray, araka ny efa nolazaiko teo aloha, raha ny momba ny voditongotra ary izay noheverin'ny olona fa ny voditongotra ho an'ny mpihaino sy ny mpankafy azy dia tsy nivadika voditongotra izy ireo. Nilaza izay marina rehetra izy ireo ary nanao izay tiany hatao. Samy nivadika voditongotra izy roa lahy.
Nanohy nanambara i Bruce Prichard fa alohan'ny lalao WWE dia samy nanaiky izany ny lehilahy.
Tany am-piandohana, eny, samy nanaiky azy tsara izy roa. Fiaraha-niasan'ny ekipa mpanoratra tamin'ny fahazoana ity lalao ity. Mety i Michael Hayes na dia ilay nanolotra ny lalao voalohany aza, raha ny tsara indrindra no tadidiko. Izany dia zavatra nolazain'ny olona rehetra hoe ‘Raha afaka manatona an'io isika, shit, ity dia mety ho tsara.’ Satria mbola nanana ny maherifo roa avy tamin'ny vanim-potoana roa samy hafa ianao.
Mampalahelo fa tsy nilalao ny fomba nandrasan'ny olona tao amin'ny WWE izany. Na dia noho ny toetra mampihomehy aza amin'ny lalao dia tsy ho kilalao WWE mihitsy izany fa mbola jeren'ny mpankafy azy ihany.
Ity vaovao # WWE2K20 ny angano ara-barotra mampiseho an'i Steve Austin, Hulk Hogan, Sting, Bret Hart ary Shawn Michaels dia samy miresaka momba ny hoe iza ilay lehilahy tamin'ny fitsipiky ny androny. pic.twitter.com/bbIKXD6uUu
- Ryan Satin (@ryansatin) 4 septambra 2019
ny fomba hihatsara amin'ny fiainana
vince mcmahon ianao noroahina indray gif
wwe king ny peratra 2019 bracket
mandra-pahoviana no mifankatia ny olona